Ahịa Egosipụta Lakes Express | RayHaber
HomeTurkeyMediterranean Region32 NkejiAhịa Ego Ngosipụta Lakes Express
09 / 11 / 2019 32 Nkeji, 35 Izmir, Mediterranean Region, Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, Mpaghara Aegean, General, Isi akụkọ, Turkey
Ahịa Ahịa Lakes Express: Ahịrị Isparta- Izmir (Basmane), nke a ga-arụ ọrụ kwa ụbọchị, Lakes Express, ikike njem ndị njem nke 262. Ndoro na ugbo ala 4mejupụtara. Flightsgbọ njem 25 nke October gafere n’ahịrị Isparta Izmir malitere na 2019 Lakes Express, na-ezute mkpa dị mkpa maka njem n’etiti Mediterranean na Aegean.
Lakes Express na-akpụ akpụ na 22: 30 na Basmane na 22: 00 na Isparta. Trainlọ ụgbọ oloko ahụ bụ usoro usoro 15400 DMU setịpụrụ, 1. na 2. wagon na enweghi onu ogugu, 3. na 4. nọmba wagon dị ka ahịa ahịa. Nwere ike ịzụta tiketi site na usoro TCDD EYBİS.
Etu esi azụta tiketi na Van Lake Express .. Ahịa ...
Tourism Express na-anọchite anya East Express
Eastern Express achoghi ike iburu……
Amzọ okporo ụzọ Pamukkale Express na Tiketi…
Tiketi tiketi maka njem si East Express!